विश्वकप २०१८: यी हुन् सबैभन्दा धेरै विश्वकप फाइनल खेल्ने देश, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
विश्वकप २०१८: यी हुन् सबैभन्दा धेरै विश्वकप फाइनल खेल्ने देश
एजेन्सी। आजदेखि विश्वकप फुटबलको २१ औं संस्करण सुरु हुँदैछ । अहिलेसम्म विश्वकपका २० संस्करण भइसकेका छन् । यी २० विश्वकपमध्ये एक चौथाइ अर्थात ५ विश्वकप जित्दै ब्राजिल विश्वकप जित्ने टिमको सूचीमा पहिलो स्थानमा छ । यसपछि समान ४–४ विश्वकप जितका साथ जर्मनी र इटली दोस्रो स्थानमा छन् ।
विश्वकपको फाइनल सबैभन्दा धेरै पटक जित्ने टिम ब्राजिल भए पनि विश्वकपको फाइनल सबैभन्दा धेरै पटक खेल्ने टिम भने जर्मनी हो । जर्मनीले अहिलेसम्म ८ विश्वकप फाइनल खेलेको छ । तीमध्ये ४ जितेको छ र ४ हारेको छ । जर्मनी १९५४, १९६६, १९७४, १९८२, १९८६, १९९०, २००२ र २०१४ गरी ८ पटक विश्वकपको फाइनल खेलेको छ । यीमध्ये उसले १९५४, १९७४, १९९० र २०१४ गरी ४ पटक फाइनल जित्दै विश्वविजेता बनेको छ ।
सबैभन्दा धेरै विश्वकप जित्ने ब्राजिल अहिलेसम्म ७ पटक फाइनल पुगेको छ । तीमध्ये उसले ५ फाइनल जितेको छ भने २ वटा मात्र फाइनल हारेको छ । ब्राजिल १९५०, १९५८, १९६२, १९७०, १९९४, १९९८ र २००२ मा फाइनल पुगेको थियो । ब्राजिलले १९५० को फाइनल आफ्नै होमग्राउण्डमा उरुग्वेसँग हारेको थियो भने १९९८ को फाइनल फ्रान्ससँग उसकै होमग्राउण्डमा हारेको थियो । बाँकी सबै फाइनल उसले जितेको छ ।
विश्वकप फाइनल खेल्ने टिमको सूचीमा तेस्रो स्थानमा इटली छ । उसले अहिलेसम्म ६ फाइनल खेलेको छ । यीमध्ये ४ फाइनल इटलीले जितेको छ र २ फाइनल हारेको छ । इटली १९३४, १९३८, १९७०, १९८२, १९९४ र २००६ मा फाइनल खेलेको छ । यीमध्ये इटलीले १९७० र १९९४ मा दुवै पटक ब्राजिलसँग फाइनल हारेको छ । यस पटकको विश्वकपमा भने छनोट चरण नै पार गर्न नसकेपछि विजेताको सूचीमा चौथो स्थानमा रहेको इटली विश्वकप खेल्नै पाएन ।
धेरै पटक फाइनल खेल्ने टिममध्ये चौथोमा अर्जेन्टिना छ । यद्यपि फाइनल जित्ने हकमा भने ऊ निकै अभागी साबित भएको छ । अर्जेन्टिना अहिलेसम्म ५ विश्वकप फाइनल खेलेको छ । १०३० को पहिलो विश्वकपमै फाइनल पुगेको अर्जेन्टिना त्यसपछि १९७८, १९८६, १९९० र २०१४ मा फाइनल पुग्यो । यद्यपि उसले १९७८ र १९८६ को फाइनल मात्र जितेको छ । बाँकी ३ फाइनल उसले हारेको छ ।
विश्वकपको फाइनलमा सबैभन्दा धेरै पटक पुग्ने टिमको सूचीमा पाँचौमा रहेर पनि सबैभन्दा अभागी मान्न सकिने टिम नेदरल्याण्ड हो । नेदरल्याण्ड विश्वकप फाइनलमा यतिसम्म अभागी छ कि अहिलेसम्म ३ पटक फाइनल खेलेको उसले एउटा पनि फाइनल जित्न सकेन । नेदरल्याण्ड अहिलेसम्म १९७४, १९७८ र २०१० मा फाइनल खेलेको छ । उसले १९७४ मा जर्मनी, १९७८ मा अर्जेन्टिना र २०१० मा स्पेनसँग फाइनल हारेको छ । यस पटकभने नेदरल्याण्ड झनै अभागी सावित हुँदै विश्वकपका लागि छनोट हुनै सकेन ।
विश्वकप फाइनलसम्म पुगेर फाइनल जित्ने हकमा भने उरुग्वे सबैभन्दा सफल देखिएको छ । उसले अहिलेसम्म २ फाइनल खेलेकोमा दुवै फाइनल जितेको छ । उसले १९३० र १९५० मा फाइनलसम्म पुगेकोमा दुवै फाइनल जितेको छ । उरुग्वेले १९३० मा अर्जेन्टिना र १९५० मा ब्राजिललाई फाइनलमा पराजित गरेको थियो । २ पटक फाइनल पुगेर एउटा जित्ने टिम फ्रान्स हो । फ्रान्स १९९८ र २००६ मा फाइनल पुगेकोमा १९९८ मा ब्राजिललाई जितेर उपाधि जितेको थियो भने २००६ मा इटलीसँग हारेको थियो ।
२ पटकसम्म फाइनल पुगेर एउटा पनि नजित्ने २ देश छन् । हंगेरी र चेकोस्लोभाकिया २ पटकसम्म विश्वकपको फाइनल पुगे तर एउटा पनि जित्न सकेनन् । हंगेरी १९३८ र १९५४ मा विश्वकप फाइनल पुगेको थियो । उसले १९३८ मा इटली र १९५४ मा जर्मनीसँग फाइनलमा हारेको थियो । चेकोस्लोभाकिया १९३४ को फाइनलमा इटलीसँग र १९६२ को फाइनलमा ब्राजिलसँग पराजित भयो ।
अहिलेसम्म एक पटक मात्र फाइनल पुगेर त्यही फाइनल जित्ने पनि २ देश छन् । इङल्याण्ड १९६६ मा एक पटक मात्र विश्वकप फाइनलसम्म पुगेको छ र उसले त्यो फाइनलमा जर्मनीलाई जितेर एकमात्र विश्व्कप उपाधि हात पारेको थियो । यस्तै स्पेन पनि एक पटक मात्र २०१० मा फाइनल पुगेको थियो । पहिलो पटक फाइनल पुगेको स्पेनले यो फाइनलमा नेदरल्याण्डसलाई हरायो । अहिलेसम्म एक पटक मात्र फाइनल पुगेर त्यही फाइनल हार्ने टिम स्वेडेन हो । स्वेडेन १९५८ मा फाइनल पुगेकोमा यो फाइनल ब्राजिलसँग हारेको थियो ।